Spiritcorner: အကြွေးရှိမှ သူဋ္ဌေးဖြစ်မည်
နိုင်ငံရပ်ခြား ရောက်နေကြသူတိုင်းအတွက်တော့ credit card, loan, mortgage ဆိုတာတွေနဲ့ သိပ်မစိမ်းလှပါဘူး။
credit card ဆိုတာကတော့ အကြွေးဝယ်ယူခွင့်ကဒ်ပြား။ ထုတ်ပေးတဲ့ ဘဏ်အပေါ်မူတည်၍သော်လည်ကောင်း၊ ကဒ်ပေါ်မူတည်၍သော်လည်းကောင်း ( initial, gold, platinum စသည်ဖြင့်) ထုတ်ချေးတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ နဲ့ အတိုးနှုန်းထားတွေက မတူညီကြပါဘူး။
loan ဆိုတာကတော့ ရေရှည်ချေးငွေ လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ ချေးချင်တဲ့ ငွေပမာဏ၊ ပြန်ဆပ်ချင်တဲ့ နှစ် ကာလအရေအတွက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကျသင့်တဲ့ အတိုးနှုန်းထားကို တခါတည်း တွက်ချက်ပြီး တလမှာ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ပြန်ဆပ်ရမည် ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ချေးတဲ့ ပုံစံတမျိုးပါ။ credit card တွေထက် အတိုးနှုန်းထား သက်သာ ပါတယ်။
mortgage ဆိုတာကတော့ အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာ အိမ်ဖိုးပိုက်ဆံ အပြည့်မရှိလို့ လိုတဲ့ငွေကို ဘဏ်က ထုတ်ချေးတဲ့ ရေရှည်ချေးငွေ ပုံစံ တမျိုးပါပဲ။ သူရဲ့အတိုးနှုန်း တွက်ပုံတွေက နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုးတွေက အမြဲတမ်း အတက်အကျဖြစ်နေတတ်လို့ fixed rate ရယ် flat rate ရယ်ဆိုပြီး တွက်ချက်နည်း ပုံစံနှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နှစ်တော်တော်ကြာကြာချေးရတဲ့ ရေရှည်ချေးငွေ တမျိုးဖြစ်တာကြောင့် ချေးလိုသူရဲ့ အသက်အရွယ် နဲ့ တကိုယ်တည်းသမားလား ဆိုတဲ့ အချက်တွေကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေထဲမှာပါ ပါတယ်။
ဘဏ်တွေနဲ့ ချေးငွေတွေအကြောင်းကို အဲဒီလို ယေဘုယျ သဘောလောက်သာ သိထားတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ jeffrey archerရဲ့ kane & abel ဆိုတဲ့စာအုပ်ရယ်၊ arthur hailey ရဲ့ the money changers ဆိုတဲ့စာအုပ်ရယ် ဖတ်အပြီးမှာတော့ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘဏ်တွေဟာ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပါတော့တယ်။ တကယ့်ကို ကမ္ဘာကျော်စာရေး ဆရာကြီးတွေ ပီပီ ဘဏ်တွေအကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာပြီး ဘဏ်တွေအလုပ်လုပ်ပုံ အနုစိတ်ကို ချယ်မြုန်းထားပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရပ်အနေနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းက စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကလုပ်ငန်းလို့ ဆိုရလောက်အောင် ဒီအကြွေးကဒ် စနစ်ကလည်း နှစ် 40-50အတွင်း အောင်အောင်မြင်မြင်ကြီးကို တိုးတက် ကြီးထွားလာပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ လိုအပ်တာထက် အဆပေါင်းများစွာပိုပြီး အတိုးနှုန်းထားတွေယူကြတယ်။ လူသားတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် မွဲဆေးဖော်ပေးကြတယ်။ အကြွေးစနစ်နဲ့ စာရိတ္ဘတွေ ဖျက်ဆီးတယ်။ လက်ငင်းပေးစရာမလို၊ တသက်လုံး ကုန်းဆပ်ဖို့သာလိုသည် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကပဲ အောင်မြင်မှုသရဖူတွေဆောင်းလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် credit card ကလေးမှမရှိရင် မျက်နှာငယ်သလိုလို၊ ခေတ်မမှီသလို အခြေအနေမျိုး အထိပါပဲ။
ဒီထက်ပိုဆိုးတာက ဖေဖော်ဝါရီ 1 ရက်နေ့ က The wall street journal မှာပါတဲ့ The suprising borrowing habbits of the rich ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မှပဲ ချမ်းသာတဲ့လူများလည်းကြွေးနဲ့ မကင်းနိုင်ပါလား လို့သိလိုက်ရပါတယ်။
A closer look at the nation's personal borrowings shows that the rich are piling on debt faster than the middle class -- though for very different reasons.
So the haves are borrowing more to keep up with the have-mores. Those in the 95th percentile to 99th percentile of wealth have almost twice as much debt as the top 1%, as measured against assets. Economists and wealth managers say it's the single-digit millionaires who are becoming the most stretched, as they borrow to match the lifestyle of even-wealthier people.
The result, says Dalton Conley,asociologist at New York University who studies status, is even more debt. "What we're seeing is the top 1% struggling to keep up with the top 1/10th of 1%," he adds. "And those people trying to keep up with the top 1/100th of 1%. There isadrive by the merely rich to keep up with the obscenely rich."
စကားမစပ် နောက်ထပ် ရယ်စရာတခုပြောရရင် ဒီနှစ် x'mas sale ချတဲ့အထဲမှာ ဘဏ်တွေလည်း ပါပါတယ်။ ဘဏ်တွေရှေ့မှာ sale ဆိုတဲ့ စာတန်းကြီးတွေကို တခမ်းတနား ချိတ်ဆွဲထားတာ မြင်တော့ ကျွန်မလည်း နည်းနည်း ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘဏ်တွေက ဘယ်လိုများ sale ချလေမလဲ ဆိုပြီးတော့ ပေါ့။ နောက်သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ loan ယူထားတဲ့သူများ သတ်မှတ်ကာလထက် စောပြီး အကြေဆပ်နိုင်လျှင် အတိုး ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ပြန်ပေးမည့်အကြောင်း၊ credit card သမားများကတော့ ဘယ်နှစ်လ အတွင်း အတိုးမယူကြောင်း၊ လျော့ပေးမည့်အကြောင်း စုံလို့ပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေပြောတာများသွားပြီး ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေး မပါသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ကြီးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ အတိုးနှုန်းဟာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် တော်တော်လေးကို သက်သာနေပါသေးတယ်။loan နဲ့ချေးမယ်ဆိုရင် pound 5000 ကို နှစ်နှစ်အတွင်းပြန်ဆပ်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်အတိုးနှုန်း တစ်လကို pound 50 ထက်မကျော်ပါဘူး။ 1% လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အလွန်အကျွံသဘောမဟုတ်ဘဲ သုံးတတ်ရင်တော့ ဆေး လို့ ယူဆပါတယ်။ money management နိုင်နင်းတဲ့ သူတွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ သာဓကတွေ အများကြီးပါ၊ ပညာရှာလိုသူများအတွက် student loan နဲ့ uni သွားနိုင်သလို စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် လည်း လည်ပတ်နေတဲ့ စီးပွားရေးမှာ ချင့်ချိန်သုံးရင် အကျိုးများနိုင်ပါတယ်။ လိုရာခရီးကို အချိန်မြန်မြန်နဲ့ ရောက်နိုင်တာပေါ့။ mortgage နဲ့ အိမ်ဝယ်သူများအနေနဲ့လည်း အမြဲတမ်း တက်နေတဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ဈေးတွေကြောင့် အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရသူ ရှားမှရှားပါ။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ သုံးဖို့၊ ဖြုန်းဖို့အတွက် သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရယ်၊ လှလှရယ်၊ ကိုယ်ရယ် ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး တွေ့သွားရဖို့အကြောင်း တော်တော်လေးရှိကြောင်းပါ။
Posted by clef at 12:46